Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.5.2 zvireruke heterogeneity
Wangova chakaita vazhinji kushanda dambudziko chairo nesayenzi, uchawana kuti vatori vako vachava heterogeneous munzira huru nenzira mbiri: vachagara dzinosiyana unyanzvi hwavo uye vachava siyana kwavo azvipire nesimba. Zvakaitwa evanhu Vatsvakurudzi vazhinji vokutanga kuti asava kbps vechikamu uye kuedza vatore wakaiswa uwandu mashoko kubva vose vasara. Iyi ndiyo nzira zvakaipa vagoronga guru kubatsirana basa.
Chokutanga, hapana chikonzero kuti asava yakaderera unyanzvi vechikamu. In pachena kunoda, pasi unyanzvi vechikamu kukonzera pasina matambudziko; mipiro yavo regai kurwadzisa munhu uye havana anoda chero nguva kuongorora. In computation hwevanhu uye vakagovera date muunganidzwa zvirongwa Ukuwo, yakanakisisa chimiro yepamusoro kuzvidzora kunouya kuburikidza redundancy, kwete matunhu bhaa muzano. Kutaura zvazviri, pane dzakakudzingai yakaderera unyanzvi vechikamu nani Inzira kuvabatsira kuita mipiro nani, zvikuru sezvo vaongorori pana eBird vakaita.
Chechipiri, hapana chikonzero kuti vatore wakaiswa uwandu mashoko kubva imwe neimwe yeboka. Kubatanidzwa zhinji vakawanda kutsigirana zvirongwa hahusi dzisakarurama (Sauermann and Franzoni 2015) ne vashoma vanhu kuita zvizhinji-dzimwe nguva inonzi mafuta musoro -uye vanhu vakawanda vanotora zvishoma-dzimwe nguva inonzi refu muswe. Kana musingadi unganidza mashoko kubva mafuta mumusoro uye refu muswe, iwe uri kusiya matani mashoko uncollected. Somuenzaniso, kana Wikipedia akabvuma 10 uye chete 10 dze ​​zvigadziriso por mupepeti, zvingava kurasikirwa vanenge 95% dze zvigadziriso (Salganik and Levy 2015) . Saka, vane vakawanda kutsigirana mapurojekiti, zvakanakisisa zvireruke heterogeneity pane kuedza kuhupedza.